The Ab Presents Nepal » महराले कांग्रेस नेताहरु संग भने -केपीले मलाई सिध्याउने योजना बनाएका छन् !
महराले कांग्रेस नेताहरु संग भने -केपीले मलाई सिध्याउने योजना बनाएका छन् !
हिरासतमा रहेका कृष्णबहादुर महराले कम्युनिस्ट नेताहरूसँग भेट्न नचाहे पनि काङ्ग्रेसका केही नेतासँग भने हिरासतमै भेटेका छन् । नेकपाका नेताहरूप्रति निकै असन्तुष्ट र दुःखी रहेका महरा उनीहरूलाई भेट्न चाहँदैनन् । तर, यसबीचमा काङ्ग्रेसका केही नेताहरूसँग भने हिरासतको अवस्थामै भेटेका छन् ।
उनले काङ्ग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासँग गत असोज २९ गते बुधबार नर्भिक अस्पतालको क्याबिनमा भेटेर २५ मिनेट लामो वार्तालाप गरेका थिए । त्यसैगरी कात्तिक १ गते शुक्रबार काङ्ग्रेसका युवा नेता एवम् सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहसँग महराको २० मिनेट लामो वार्तालाप भएको थियो ।गिरिजाप्रसाद कोइरालाका स्वकीय सचिवका रूपमा समेत चिनिएका काङ्ग्रेसका युवा नेता गोकर्ण पौडेलले भने अनामनगरस्थित हिरासत कक्षमै गएर महरासँग भेटेका थिए । काङ्ग्रेस नेताहरूसँगको भेटमा कृष्णबहादुर महराले आफूलाई केपी ओलीले फसाएको बताएका छन् ।
महराको भनाइ थियो,अघिल्लोपटक केपी प्रधानमन्त्री भएका बेला उनलाई हटाउन मैले भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने उनलाई परेको छ । त्यसबेलादेखि नै मसँग केपीको शत्रुता थियो । उनले मलाई सभामुख बन्न पनि नदिन खोजेका थिए । सभामुख पद छोडेर उपप्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्दा पनि मैले अस्वीकार गरेको थिएँ । त्यसपछि अग्नि खरेलकी श्रीमतीलाई अघि सारेर सम्बन्धित टोलमा सीसीटीभी जडान गरियो । त्यहाँ आर्मीको इन्टेलिजेन्स पनि खटाइएको थियो । केपीले मलाई मात्र होइन, मातृका यादव, कृष्ण सिटौला, अमरेश सिंह र वर्षमान पुनलाई समेत सिध्याउने योजना बनाएका छन् ।यसरी काङ्ग्रेस नेताहरूसँग खुलेर कुरा गरे पनि माधवकुमार नेपाललगायत नेकपाका नेताहरूसँग भेट गर्न उनले अस्वीकार गरेका छन् । आफूले नजिकको साथी ठानेका व्यक्तिहरूलाई मात्र महराले हिरासतमा भेट्ने गरेका छन् ।
घटना र विचार बाट साभार गरिएको